Akuwona owokuqala oye waqhubeka iminyaka eyikhulu, njengoba usuvele ujwayele kumafasitela ethu, ngakho-ke ngokuvamile i-Kalanchoe engabonakali. Manje sikhuluma nge-pinnate noma i-Kalanchoe Degremona. Akuyona into ebizwa ngokuthi "i-ginseng yangaphakathi", lesi sitshalo esihlala njalo esihlwanyela esineziqabunga ezinomsoco, iziqu. Amaqabunga awo ayinqolobane yangempela yamavithamini nezakhi.
Zahlulela wena, izazi zethu zezinto eziphilayo zitholile kumswakama we-Kalanchoe: i-flavonoids, i-polysaccharides, usawoti wamaminerali, ama-microelements, i-acids ephilayo (i-acetic, i-oxalic, i-citric, i-apula) no-vithamini C. Abantu abaningi abazi ukuthi ngeshwa ukuthi amaqabunga angaphezu kwezinhlobo ezimbili angadliwa ukusebenzisa. Amahlamvu ahlanziwe kahle, anqunywe zibe izingcezu ezincane futhi wanezela kuma saladi amazambane nama-vinaigrettes.
Uma othile ethanda ukunambitheka kwe-Kalanchoe, bangafaka ikhukhamba eqoshiwe emaqabunga aqoshiwe, i-avocado, ngaphandle kwekhasi, ne-cubes encane, ingahlungwa. Yengeza isaladi yakho nge isipuni selamula kalamula kanye nanoma yimaphi amafutha omquba.
I-Kalanchoe enconywa kakhulu kulabo abahlupheka nge- periodontitis ne-gingivitis . Leyo yinkimbinkimbi yezinto ezitholakala kulesi sitshalo, inciphisa izinsini eziphuma egazini, inciphisa ukuvuvukala, i-mucosa yomlomo inomphumela omuhle.
Kuwusizo ukuqhuba ukuchelela kelanchoe emlonyeni. Kulula ukupheka: hlambulula amaqabunga aphansi e-Kalanchoe kahle, uwabeke bese uwafakela nge-juicer noma nge-cheesecloth. I-syringe ukuchelela, kungcono ukuthatha isirinji elahlwayo, emva kokuxubha amazinyo akho kabili ngosuku. Nsuku zonke kuyinto efiselekayo ukulungisa ijusi elisha.
Ukusabalalisa i-gum kungenzeka, kanti umunwe ophakathi ufakwa emanzini amasha e-Kalanchoe. Isandla, Yebo, sandulela ukuphathwa ngotshwala. Uma izinqubo zenziwa nsuku zonke, isimo sezinsini kuzokwenza ngcono.
Indlela yokulungisa " ukuvuselela kwe-biogenic " kusuka ku-calanchoe ne-aloe? Kubalulekile ukubeka amaqabunga aqunyiwe esiqandisini eshalofini esingezansi izinsuku ezingu-12. Ezimweni zokushisa okuphansi kanye nobumnyama emaqabunga aqunyiwe, kwenziwa izinto ezikhethekile, ezikwazi ukwenza izinqubo ezibalulekile ezibalulekile emzimbeni, okwandisa izivikelo zomzimba.
Ijusi elivela emaqabunga e-Kalanchoe, ayenze ukwelashwa okunjalo, angcwatshwa emakhaleni 3-5 amaconsi ngaphambi kokuphuma endlini. Mhlawumbe, amaconsi anjalo angakusindisa "emakhazeni" alandelayo.
Izakhiwo eziwusizo ze-Kalanchoe zisetshenziselwa ukuvimbela umkhuhlane . Udinga amaconsi amabili ku-nostril ngayinye ukumba ngamabili izikhathi ngosuku. Uma kwenzeka umkhuhlane wesifo obandayo, umusi we-Kalanchoe kufanele uxubane ngamanzi ngesigamu futhi uhlanganise izikhathi eziningana ngosuku
Ngesifo sofuba , ijusi le-Kalanchoe kufanele lithathwe ngomlomo ngesigamu sesipuni, ihlanjululwe ngamanzi izikhathi ezintathu. Thatha izikhathi ezimbili ngosuku emva kokudla.
Nge-veicic veins, imilenze igubha nge-Kalanchoe tincture. Ukulungisa le tincture: Gcwalisa isigamu ibhodlela nge-0.5 amalitha amaqabunga e-Kalanchoe anqunyiwe bese uthela ngaphezulu nge-vodka noma u-70% utshwala. Beka ibhodlela endaweni emnyama, ngezikhathi ezithile ukuzamazama. Ngemva kwesonto i-tincture isilungile. Ukugcoba kuyadingeka ezinyangeni zokuhlwa, ukuhamba ukusuka ezinyaweni kuya emadolweni nangaphezulu. Emilenzeni, ubuhlungu buyadlula ngokushesha, kodwa ukuze inetha le-vein liphele, kubalulekile ukuphinda le nqubo ngokulandelana kwezinyanga ezingu-4.
I-Kalanchoe, ngendlela ongeke ukwazi ukudideka ngayo. Emanzini amaqabunga e-Kalancho omdala avela izinso ezinsana - izinsana. Ingane ngayinye uhlobo oluthile lwe-ginseng "yangaphakathi". Amaqabunga nezingane aqothulwe futhi i-convex engaphansi ihlelwe ebhokisini elinomhlabathi kusuka komunye nomunye ibanga elingamamitha angu-10-20.
Ngenyanga nesigamu lezi zingane zinezikhathi zokwelula amasentimitha angu-10 futhi zithole amaqabunga angu-4-6. Manje zingatshalwa ezitsheni ezihlukene. Ukunakekela izitshalo, umuntu angathemba isivuno esihle samavithamini esaladi.
Isitoreji sama-flower ebusika
Izitshalo ezingaphakathi: Radermacher
Izitshalo ezingaphakathi: pedalanthus
Izindlu zezindlu - camellia izimbali
Izibuko ze-Aviator: i-accessory ye-intombazane enemfashini
Uma umfana wakho elala namadoda - umbuzo wamantombazane
Isiqu sezimbali ngaphakathi kwevase
Cutlets kusuka duck ukugxilisa
Indlela yokuziphatha embhedeni nomuntu? Amathiphu ambalwa
Isaladi nge-omelette: isidlo ngendlela ehlanjululwe
Ungalungiselela kanjani ukudlula kwe-USE
Psychology of ubudlelwano phakathi kwendoda nowesifazane: ukuhlazeka
Indlela yokukhuluma efonini nendoda?
Isaladi ngo-Mashi 8, 2017 - zokupheka ezilula nezomnandi ngezithombe, imibono yokuhlobisa imikhosi. "I-salad" Romashkovoye "ehlonishwa ngoMashi 8
Izinkanyezi zasehlobo ezenzelwe izimpawu zodiacac
I-Phraseology, kusukela endizeni eyenza indlovu